SOMAAN GOOTAA URGAAYEE – 3 -
SOMAAN GOOTAA URGAAYEE – 3
bilisummaa September 29, 2014	Leave a comment
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, amma kutaa isa xumura kana keessatti walaloo: “Somaan Gotaa Urgaayee” jedhamu sanituu isiniif dhiyaata. Walaloon kanaa gadatti isiniif dhiyaate kun: “Walaloota Uummata Oromoo” kanneen kanaan dura Oromiyaa Watajjii irraa walitti qabeeyyu keessaa kan fuudhame. Barreeffama kana kutaalee dabran lamaan keessatti waan massaanii (babnii) fi ka’umsi walaloo kanaa isiniif dhiyaatee tureef, amma as irratti irra hin deebiyamu.
Namtichi Saayiluu Dufaayee jedhamu kun wanneen inni akkuma magaalaa Amboo gayeen, Oromoonni akka hin goonee fi duukaa hin buune dhoowwutti ka’e keessaa inni tokko: “ulee qabattanii hin deeminaa” jechuu isaati. Warri walaloo kana baase: “uleedhuma ati nu dhoowwitu sanaan sitti kaana! Somaa sitti marree sitti urgeessina” jechuu isaanii-ti. Eekaa, inni meeshaa waraanaa qabeenya Oromoo fi leecalloo Oromiyaatiin bitame: qawwee, taankii fi roopphilaa waraanaa faa qabatullee Oromoon isa hin sodaannee waan qabu, shimalaan dura goruuf kutate jechaa dha. Saayiluu Dufaayee kun diddaa uummataa irraan kan ka’een, Ambo irraa gara Naqamteetti akka dabarfameeyyu kutaa dabre keessatti tuqameeti ture. Booda immoo achi irraa gara bulchaa godina Arsii tahuun gara Asallaatti dabre. Ennaa Waldaan Maccaa-Tuulamaa magaalaa Dheeraatti yaa’ii isaa gaggeeffate san, inni akka korri kun hin godhamneef hedduu dura dhaabachaa, dabreeyyuu foolisiin dhoowwisiisaa ture. Kutannoo cimtuu Oromoonni Arsii fi miseensonni waldaaa kanaa agarsiisaniin yaa’iin sun fiixaan-bawuu dandaye. Erga yaa’iin sun xumurameellee namoota achii galan irratti foolisii ergee gara namoota afurii galaafachiisee ture. Namni kun jibbii fi hammeenyi inni uummata Oromoo irratti qabu hedduu hamaa ture. Warraaqsa bara 1974 booda nomoota 60 Dargiin ajjeefaman keessaa isa tokko ture.
Yaa Saayiluu Dufaayee
Somaan, somaan gootaa urgaayee
Saayiluu yalma Dufaayee
Somaan, somaan gootaa urgaayee!
(*inni kun Buufata!*)
1) Somaa Gindabarat
Qabattee hin baatuu
Yoo dhufe innisoo!
2) Yaa Kuttaaye hin jettuu
Yaa Abeebe hin jettuu
Kuttaaye isa Koluu
Abeebe isa Koluu
Ammas taanaan durii
Innoo diinaan toluu!
3) Yaa Waliso hin jettuu
Waliso isa Dandii
Walisoo isa Boddaa
Yoo baalageen quufte
Yoo roorroon hammate
4) Maaf yaa Bacho hin jenne
Bacho goodaa Qarsaa
Gaaf sarageen quufte*
Gaaf roorrisaan goobe
5) Jabbilee Walisoo fi ijoollee Kuttaayee
Waayee-shiin dhageenyee Saayiluu Dufaayee
Biyya Sadan Liiban somaatu baroodaa
Walirraan dheensituu aadaa-shiitiin oodaa!
6) Asiin buutus garbaa
Achiin buutus garbaa
Yaa duchiiftu arbaa!
Barreeffamni kutaalee sadiitti qoodamuun dhiyaate kun hamma tokko wayyee hacuccaa fi roorroo uummata Oromoo irratti gabroomfattoota Habashaatiin adeemsifamaa ture nuuf addeessa. Hamma tokkos diddaa fi fincila uummanni kun adeemsisaa ture nutti agarsiisa. Diddaa fi fincilli akkanaa kun godinoota Oromiyaa fi gosolii Oromoo maraan kan adeemsifamaa ture. Haatahu malee, barreeffamuun uummataaf hin dhiyaanne. Dhugaa, kun hojii fi dirqama Oromoota waa baratan ija-banatee ilaalaa jiru. Kunis qaama qabsoo saba keenyaa tahuu isaa akeekkachuu fi beekuun irratti xiyyaaffannee adeemsisuu qabna. Amma uummanni Oromoo karaa maraan cimee, tokkoomee, hidhatee garuma fuuldurraatti tarkaanfachuu malee, filmaata biraa hin qabu. Uummanni Oromoo birmadummaa, sabni Oromoo bilisummaa, biyyi Oromoo, Oromiyaan walabummaa ofii humna ofiitiin deebifatanii akka gonfatan abdiin kiyya daran guddaa dha!
* “saragee” = “wanbadee“, “kashalabbee“, “gandalabbee” jechuu dha.
** “beeljoo” = qawwee “beeljigii” jedhamu kan Biyya Beeljigii-tti (“Belgium“) hojjatamuun booda gara biyya keenyaa seene.
Previous Yaadannoo gabaabaa xiinxala Obbo Jawhar Mohamad ilaalchisee:
Next Washigton Dctti kan argamu Embasii Ityoopiyaa keessatti har’a dhukaasi banamee jira.